Ny fahaleovantena mantsy azo fa ilay fiandrianam-pirenena no miteraka adihevitra. Nanatrika ireny foara momba ny fitaovam-piadiana ireny ny minisitry ny fiarovam-pirenena nijery fitaovana entina manampy ny fitaovan’ny fanjakana Malagasy toy ny fiaramanidina, angidimby… Tena mahavelombolo izany saingy ahoana ny mangarahara amin`ireo fitaovam-piadiana tafiditra eto amintsika ? Mivaivay ihany koa ny fanakianana mahakasika ny filaharan`ny Tafika Frantsay etsy Mahamasina. Miezaka manazava ny antony amin`ny fandraisana fanapahan-kevitra samihafa moa ny fitondram-panjakana saingy mba ahoana ny fiantraikany amin`ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, indrindra amin`izao ankatoky ny fetim-pirenena izao ? Hanao ahoana ny endrika vaovao ahitana taratra fa miady ho an`ny fiandrianam-pirenentsika isika ? Raha ny zava-misy aloha dia banga amin`ny ampahany izany ka mahatonga ny adihevitra maro samihafa.